(ဖင်လန် မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
ငွေကြေးဟောင်းဖြစ်သည့် မာက်ကာ Finnish markka ကို ယူရို euro နှင့် ၂၀၀၂ တွင် အစားထိုး အသုံးပြုခဲ့သည်။ ထိုနေ့ကို ကြိုဆိုသောအားဖြင့် ယူရိုငွေကြေးစေ့များကို ၁၉၉၉ တွင် စတင်ထုတ်ဝေမှုများရှိခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ငွေကြေးစေ့များကို ကြည့်ပါက အခြား ဥရောပဇုန် နိုင်ငံများ နှင့်မတူဘဲ အဟောင်းဆုံး ခုနှစ်မှာ စတင်အသုံးပြုသည့် ၂၀၀၂ ခုနှစ်အစား၊ ၁၉၉၉ကို တွေ့ရှိနိုင်သည်။ ဒီဇိုင်းပုံစံ ၃မျိုးကို (ဒီဇိုင်း ၂ခုကို ၂ယူရို နှင့် ၁ယူရိုတို့အတွက် အသုံးပြုပြီး၊ ကျန်ဒီဇိုင်းကို ကြေးစေ့ အသေးစားများတွင် ၅၀၊ ၂၀၊၁၀၊၅ ဆန့် အထိ အသုံးပြုပြီး၊ ) ဖင်လန်ငွေ ယူရိုအတွက် ရွေးခြယ်အသုံးပြုသည်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် ဥရောပဇုန် နိုင်ငံများနည်းတူ ငွေကြေးစေ့များတွင် ပုံမှန်ပါရှိသည့် မြေပုံဟောင်းအား မြေပုံအသစ် အစားထိုး စတင်အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက်၊ ဖင်လန် ငွေကြေးစေ့ မျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံးကို မြေပုံအသစ်ဖြစ် ပြောင်းလည်း ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
စိုထိုင်းပြီး အေးစိမ့်သည့် နေရာတွင် တည်ရှိပြီး၊ နွေရာသီတွင် နွေးထွေးပြီး ဆောင်းရာသီတွင် အေးခဲလောက်သည့် ရာသီဥတုဖြစ်သည်။ ဖင်လန်တောင်ဘက်ရှိ ရာသီဥတုသည် ကမ္ဘာ့မြောင်ပိုင်းတွင် တည်ရှိသည့် ရာသီများနှင့် တူသည်။ တောင်ပိုင်း ဆောင်းရာသီတွင် အအေးချိန်သည် (ပံမှန်အားဖြင့် ၀စင်တီဂရိတ် အောက်တွင်ရှိသည်) ၄လာကြာမြင့်ပြီး နှင်းများသည် ဒီဇင်ဘာမှစ၍ ဖုံးလွှမ်းနိုင်ပြီး၊ ဧပြီလစမ်း အထိဖြစ်သည်။ တောင်ဘက်ကမ်းစပ်များ၏ ဆောင်းရာသီဦးပိုင်းတွင် နှင်များ မကြာခဏ ပြန်ပျော်လေ့ရှိပြီးမှ ပြန်လည်ဖုံးလွှမ်းခြင်းမျိုးရှိသည်။ တောင်ဘက်ပိုင်းရှိ အအေးဆုံးနေ့များတွင် -၂၀အောက်အထိဖြစ်နိုင်ပြီး၊ အပူဆုံးနေ့များမှာ ဇူလိုင် နှင့် ဩဂုတ်လများတွင်ဖြစ်နိုင်ပြီး၊ အပူချိန် ၃၀ အထိရှိနိုင်သည်။
နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေး ကျယ်ပြန့်လာသည် နှင့် အမျှ၊ လုပ်ငန်းများသည်လည်း ကျယ်ပြန့်လာသည်။ လျှပ်စစ်ကုမ္ပဏီကြီးများဖြစ်သည့် နိုကီယာ၊ သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင် နှင့် စက်မှုထုတ်လုပ်ပိုင်းဆိုရာ ဗိုင်းဆာလာ၊ လောင်စာဆီ ဖြန့်ဖြူးသည့် နက်စ်တယ်အွိုင်း၊ ဓါတုဗေဒပစ္စည်များထုတ်လုပ်သည့် ကယ်မီရာ၊ အင်ဂျင်နီယာ နည်းပညာ ကူညီသည့် ပိုန်းဝူရူ နှင့် သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာ တွင် ရိုဗီရို ဖျော်ဖြေရေး များကြောင့် နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးသည် နှစ်ပိုင်းခွဲ၍ မရတော့ပေ။
↑ The Failed States Index 2008။ Fundforpeace.org။ 2010-08-26 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ The 2009 Legatum Prosperity Index။ Prosperity.com။ 2010-02-04 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Her er verdens mest konkurransedyktige land—Makro og politikk။ E24.no။ 2011-03-06 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ People Living with HIV/AIDS (Adults and Children)။ GlobalHealthFacts.org။ 2010-02-04 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Finland's Northern Conditions—Challenges and Opportunities for Agriculture (PDF), p. 4
↑ Transport and communications ministry—Rail. For year 2009 update: Finnish Railway Statistics 2010. For subsequent years when available: Finnish Railway Statistics.
↑ Summary sheets on education systems in Europe။ Eurydice.org။ 2010-08-26 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Top University Ranking of 2010: University of Helsinki။
↑ The Global Competitiveness Report 2006–2007: Country Highlights။ World Economic Forum။ 2007-01-22 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Kari Sipilä, D.Sc.(Tech)h.c။ A country that innovates။ Virtual Finland။ Ministry for Foreign Affairs/Department for Communication and Culture/Unit for Promotion and Publications/Embassy and Consulates General of Finland in China။
↑ 2010 Freedom of the Press Survey Retrieved at4May 2011
↑ Media moves။ ThisisFINLAND (Ministry for Foreign Affairs of Finland)။
↑ Circulation Statistics။ The Finnish Audit Bureau of Circulations (Levikintarkastus Oy)။ 25 July 2009 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Juttuarkisto - Aamulehti
↑ Market Review 2/2007 (PDF)။ Finnish Communications Regulatory Authority (FICORA) (2007-08-31)။ 2009-03-18 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2007-09-04 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဖင်လန်နိုင်ငံ&oldid=462718" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၈ ဇွန် ၂၀၁၉၊ ၀၇:၂၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။